What's So Good About Good Friday? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waa wax iska caadi ah in la xusuusto maalinta dhimashaduna qof ee. Qof kasta oo ka badiyay qof aad jeceshahay waa og yahay inaad waligey illoobi doonaa maalinta ay maray. Waa dhamaadka nolosha a, waana qaracan.
Dabcan, sida tartan aadanaha, waxaan aadan xusuusan ma aha oo kaliya kuwa la jecel yahay. Marka tirooyinka dadweynaha muhiim xilli hore dhintaan, waxaannu xusuusan nahay oo ay barooran doonaan maalinta ay qaaday naga iyo sidoo. Our quruun xusuustaa maalintii Martin Luther King Jr ah. ayaa la toogtay, iyo maalin John F Kennedy ee la dilay. Laakiin wakhtigaas gaar ah waxaa marnaba gudbiyo sida wanaagsan. Kuwa ahaayeen maalmood bahalnimada, halkaas oo nin oo la jecel yahay la dilay by dilay xaasidnimo.
Weli, laba kun oo sano ka hor Ciisihii reer Naasared la dilay by dilay xaasidnimo ah isaga u gaar ah, oo maalintaas sida "Good waxaannu xusuusan nahay” Friday. Waa maxay sidaa wanaagsan oo ku saabsan maalinta ugu hadlay oo ku saabsan nin ee taariikhda aadanaha waxaa xoog ku garaacay iyo dilay by cadaawayaashiisa?
Xaqiiqada ah in dadka sharka ku fikira lahaa in dilka Wiilka Ilaah waa naxdin leh, waana wax shaki dembi ugu weynaa abid ka go'an. Laakiin dhimashadiisa waa ka duwan dhimasho kale oo kasta waxaa ka hor ama ka dib waxa . Waxaan wici kartaa maalintaas "Good" Friday sababo badan. Wuxuu jira laba.
1. Jimce Wanaagsan waa wanaagsan yahay, sababta oo ah waxa Ciise dhammaado iyada oo uu dhintay
Marka ugu naga mid ah u dhowaan dhimashada, waxaana soo socda in dhamaadka shaqada our nolosha iyo rajo ka hartay nabad. Laakiin Ciise markuu u tegey inuu iskutallaabta, Waxa uu ahaa laga bilaabo qaybta ugu muhiimsan ee shaqada uu nolosha ee. Dhimashadii Ciise waxa uu ahaa in ka badan dhammaadka garaaca wadnaha a; waxay ahayd fulinta qorshaha Ilaah inuu badbaadiyo dembilayaasha. Ciise xallin in ay qaataan on dembiga inaga sooci Ilaah, ama sida Paul uu leeyahay, Ciise waxa uu ahaa, "Qaadashada nabad ku dhiiga iskutallaabtiisa" (Kolosay 1:20).
Bal erayadayda maqal, qaraar ee Galatiya 3:13, "Masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga by noqday inkaar inoo-waayo, waxaa qoran, Inkaaru ha ku dhacdo ku alla kii waxaa aad geedka ku deldesheen ' "
Inkastoo uu daahirsanaanta, Ciise Masiix meeshii ay dembilayaasha istaagay, oo wuxuu qabsaday xukunka in aan kasbaday.
1 Peter 3:18 ayaa sheegay in, "Maxaa yeelay, Masiixba mar u xanuunsaday dembiyada, kii xaqa ahaa mid xaqdaran, inuu inoo keeno Ilaah ... "
Maalintii in Wiilka Ilaah lagu dilaa oo la odhan karaa maalin wanaagsan, maxaa yeelay waxa ay aanu keenay nolosha!
2. Jimce Wanaagsan waa wanaagsan yahay, sababtoo ah ma yahay dhamaadka sheekada
Ilaah sara kiciyey, furaysaan foosheed dhimashada, maxaa yeelay, ma suurtowdo ahayd inuu la qaban waxa by. (Acts 2:24)
Ciise meydkiisii ​​kuma ay sii tabar iyo nolol la'aan. saaka, Waxa uu ka grave- buuxa xoog iyo ammaan la kiciyey. Wuxuu waxaa lagu arkay, jidhka ku, by boqolaal uu dhintay ka dib, iyo ugu dhakhsaha badan ka dib markii uu baxay Samooyinka.
Haddii Ciise ka qabriga ma sara kacay, markaas ma aan wici karto this "Jimce Wanaagsan." Haddii Ciise wuxuu weli joogay qabriga, Waxaan jeclaan lahaa gabi ahaanba aan rajo lahayn. Waxaa jiri lahaa rajo ma madaxfurashada waayo, ninkii dhacay ama dib u soo celinta dunida naga jabi. Waxaynu og nahay in uu la sara kicin, taasina waxa ay na siinaysaa sabab inay farxaan, oo in kuwa isaga isku halleeya.
Save dirges iyo R.I.P. ee aad, maxaa yeelay, Ciise Masiix ma aha dhintay. Waxa uu nool yahay iyo sidoo kale waa, wuxuuna wayn taliya! Jimce Wanaagsan waa News Good for dembilayaasha aniga iyo adiga oo kale.
Dempsey tapley • August 19, 2013 at 8:44 waxaan ahay • Reply
Jacaylka this! Anigu waxaan ku dhowaad reading this 2 sano ka dib, laakiin waxaa xaqiiqo ah u qalantay aan akhrin iyo waxa kaliya igu dhalisay inay Rabbiga ammaanaan oo rajaynayaa oo dhan ka badan mustaqbalka ahu wuxuu leeyahay dukaanka aniga iyo qoyskeyga iyo xagga Ciise Masiix, waayo,! IN MAGACA CIISE, AAMIIN!